Caalamka Online » Shiinaha oo albaabada u furay dadka xirfadooda ku xeeldheer
Dawladda Shiinaha ayaa dadka xirfadaha sare leh ee dibadda ku nool siin doonta dal ku gal wakhti dheer ah.
Dal ku galkan oo shaqayn doona shan ama 10 sano ayaa qofka la siiyo u saamixi doona in uu dalka galo kana baxo marka uu doono muddadaas, sida ay ku warrantay warbaahinta dawladda.
Hogaamiyeyaasha teknoolajiyadda, hal abuureyaasha ganacsiga iyo saynisyahannada ayaa ka mid ah dadka ay u furan tahay in ay codsadaan.
Shiinaha ayaa dajistay himilooyin uu ku hiigsanayo hormartinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, wuxuuna u arkaa in xaqiijinta arrintaas ay fure u tahay shaqo siinta dad khuburo u ah.
Markii arrintan la dajinayay Shiinuhu wuxuu qorsheeyay in ay arrintan ka faa’iidaytaan 50,000 oo ajaaniib ah.
Soo dhawaynta dadka abaalmarinta Nobel-ka ku guulaysta
Dal ku galkan waxaa laga codsan karaan online-ka, waa bilaash si dhakhso ah ayaana loo bixin doonaa ayay tiri xukuumadda Shiinuha.
Dadka dal ku galkan hela waxaa loo ogolaan doonaa in ay dalka ku sugnaadaan 180 maal mood oo xiriir ah halkii marba, waxayna xaq u yeelan doonaan in ay keensadaan lamaanahooda iyo carruurtooda.
Sannadkii 2016kii Shiinuhu wuxuu soo saaray in uu darajo u kala yeelo shaqaalaha ajaaniibta ah ee dalkiisa ka shaqeeya, arrintaas oo loogu talagalay in lagu ogaado xirfadleyaasha dalka looga baahan yahay ee ay tahay in la soo jiito iyo dhimidda ajaaniibta laga maarmo ee shaqaale hoosaadka ah.
Xogta wakhtigaas la sii daayay dadka darajada sare la siiyay ee ajaaniibta ah waxaa ka mid ahaa dadka ku guulaystay abaalmarinnada Nobel Prize, dadka Olambigga meel sare ka gaaray, madaxdda koleejyada caanka ku ah muusigga iyo farshaxanka.
Waxaa sidoo kale arrintan ka faa’iidi doona saynisyahannada, masuuliyiinta waaxaha dhaqaalaha iyo bareyaasha sare ee “jaamacadaha caalamiga ah”.